Samsung weputara DeX desktọọpụ ngwa maka Galaxy Note 10 | Gam akporosis
Samsung na-ebipụta ngwa desktọọpụ DeX maka iji ya na Galaxy Note 10
Samsung weputara ngwa DeX desktọọpụ nke na-enye ya ohere ịrụ ọrụ dị ka windo na desktọọpụ PC gị na Windows na macOS. Ngwá ọrụ bara uru bara uru nke na-enweghị onye ọ bụla nwere ruo taa.
Ngwa dakọtara na Windows 7 na Windows 10 dị nnọọ ka ọ na-arụ ọrụ na ma High Sierra na Mojave na macOS. Ya mere, anyị nwere ike ịnwe Samsung DeX jikọọ na nke ọhụụ ọhụrụ Galaxy Note 10 na kọmpụta anyị.
Ozugbo anyị wụnye ngwa ahụ na kọmputa anyị, sọftụwia ahụ ga-amalite oge ijiri eriri USB jikọọ ekwentị gị na kọmputa gị. Otu n'ime atụmatụ ndị pụtara ìhè nke DeX nwere anyị nwere ike igosipụta na ugbu a, site na iji ngwa ọhụrụ a, ị nwere ike bufee ọdịnaya site na kọmputa gị na ekwentị gị na nke ọzọ n'ụzọ dị mfe.
Nke ahụ bụ, Naanị ị ga-adọkpụrụ faịlụ site na windo DeX na Galaxy gị nke mere na a na-enyefefefe ma mee ya ngwa ngwa. N'ime ọrụ DeX ndị ọzọ, enwere ike idetuo na mado ederede n'etiti ekwentị na desktọọpụ, yana ịdọrọ faịlụ n'ime ozi, ozi, Samsung Notes na Samsung Members app.
Ọzọ Samsung DeX ngwa bụ will ga-enwe ike ihu niile thatma Ọkwa na iru gị mobile site na otu kọmputa ahụ, yabụ ijikọ ya na laptọọpụ gị ugbu a ga-adịkarị mkpa oge ọ bụla anyị ga-arụ ọrụ.
Ihe ga-adị mma nke ukwuu ga-abụ na anyị anaghị achọ njikọ USB mgbe niile iji nwee ike jikọọ Samsung DeX, ebe ọ bụ naanị ụzọ iji nwee ike ịrụ ọrụ na uru niile ọ na-enye. Ah cheta na ugbu a ọ ka bụ naanị maka Galaxy Note 10 ruo mgbe eburu ya gaa na ọdụ ndị ọzọ. Ihe niile ga - abụ naanị maka ekwentị ọhụrụ gị nke ahụ agbajiri ndekọ ndekọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-ebipụta ngwa desktọọpụ DeX maka iji ya na Galaxy Note 10
AnTuTu na-enyocha Redmi Rịba ama 8 Pro ma gosipụta ya dị ka oke etiti dị ike
Kedu ihe ga-abụ nsụgharị 2.0 nke Otu UI na gam akporo 10 si Samsung na-abịa n'ìhè